I-NMR, iOptics Experiment, iModulus eNtsha-yezeMisebenzi
IiLaser kunye neFotoonics
Iikiti zeMfundo yeOptics
I-F-29 yeFluorescence Spectrophotometer
I-TJ270-30A ye-Dual Beam ye-Spectrophotometer ye-infrared
I-LCP-3 Optics Kit yovavanyo-Imodeli eyonyusiweyo
I-LIT-6 ye-Interferometer echanekileyo
Umlinganiso we-LPT-6 we-Photoelectric Characterist ...
I-LADP-10 Izixhobo zikaFranck-Hertz ...
I-LGS-2 yovavanyo lwe-CCD Spectrometer
I-Spectrometer ye-FTIR-990AD yeFTIR
Izixhobo zeTianjin Labor Scientific Co., Ltd. Ime eTianjin Innovation Industrial Park, eBeijing kwiCandelo laseTshayina lezeNzululwazi kwindawo ezizimeleyo zokubonisa kuzwelonke. Ipaki yezorhwebo yaseTianjin yeSebe lase-Beijing le-Chinese Academy yezeNzululwazi yimpumelelo ebalulekileyo ye-CAS ekuphenduleni ngokukuko kwisicwangciso-qhinga sesizwe ngokubanzi “sokuphuculwa kophuhliso lweBeijing, iTianjin kunye neHebei” ebekwe ngaphambili yi-CPC Central Committee ..
U-Hao ping, owayengumphathiswa wezemfundo e-China, kunye nabanye abaphathiswa bezemfundo belizwe basindwendwele. sazisa ubuchwephesha bethu kuyilo lwe-R & D kunye nezixhobo zesayensi yokuthengisa kubo, bonke babenomdla ngokunzulu ngentshayelelo yethu.
Amanyathelo okhuseleko kulondolozo lwee-infra ...
Kwiminyaka yakutshanje, icandelo lokhuseleko lokusingqongileyo lithathe ithuba ngemigaqo-nkqubo elungileyo, ekunokuthiwa iyathandwa. Izinga lokukhula kolu shishino ngamatyeli aliqela ...
Umgangatho omtsha wokumiselwa kweoyile kwi-w ...
Akumangalisi ukuba abantu abaninzi bathi izixhobo zokukhusela okusingqongileyo phantse kuyo yonke indawo, nokuba yimveliso yoshishino okanye kubomi bemihla ngemihla. Oku "kungena" kuthuleyo kuzisa ngakumbi ...
Igumbi le-308, isakhiwo se-F4, inombolo ye-6 ye-Huafeng, indawo ye-Huaming high-tech, isithili sase-Dongli, kwisiXeko saseTianjin